केसी आउन नमानेपछि जुम्ला जान लागेको हेलिकोप्टर रोकियो - Naya Patrika
– काठमाडौंमा अर्जुन अधिकारी
– जुम्लामा मानदत्त रावल
१२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई लिन बुधबार काठमाडौंबाट चिकित्सकसहितको टोली जुम्ला जाने तयारी भयो । सेनाको हेलिकोप्टर जाने व्यवस्था मिलिसकेको थियो । तर, उड्ने तयारीमा रहेको हेलिकोप्टर काठमाडौंमै रोकियो ।
आफू काठमाडौं नफर्किने जवाफ डा. केसीले फोनबाटै दिएपछि चिकित्सकसहितको टोली रोकिएको हो । नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई केसीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । ‘केसीले भेट्न मात्रै आउनू, लिन नआउनू भनेपछि हामी जानुको कुनै अर्थ र औचित्य थिएन,’ संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘उनलाई काठमाडौं ल्याएरै जीवनरक्षा गर्ने र मागबारे कुरा गर्ने योजना सरकारको भए पनि उनले नआउने अडान लिएपछि हामी पनि सरकारको आग्रह नकार्न बाध्य भयौँ ।’
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनअनुसार नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह हेलिकोप्टरमा जुम्ला जाने तयारी थियो ।
काठमाडौं ल्याएर मात्रै वार्ता टोली गठन
सरकारले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएर मात्रै वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने बताएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै संघका महासचिव कार्कीले भने, ‘केसीलाई काठमाडौं ल्याउनोस्, त्यसपछि वार्ता समिति बनाएर अगाडि जाउँला ।’
पाँच दिनअघि चिकित्सक संघले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेल र सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई अनशनस्थल जुम्ला पठाएको थियो । तर, केसीले प्राण रहेसम्म आफ्नो प्रण पूरा गर्नका लागि जुम्ला नछाड्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं ल्याउने तयारीमा रहे पनि केसी कुनै पनि हालतमा तयार नदेखिएको कार्कीले बताए ।
खुलामञ्चमा वार्ता बसौँ, टेलिभिजनमा लाइभ गरौँ
केसी वार्ताका लागि तयार हुनुपर्छ । उनको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार छ । तर, निरन्तर आफ्नो हठ नत्याग्ने हो भने समस्या ज्युँका त्युँ हुनेछ । उहाँ काठमाडौं आउनुपर्छ, सरकार वार्ता गर्न तयार छ, अनशन बसिरहनुपर्दैन । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता अधिकार दिन सरकार तयार छ । गोविन्द केसीसँग बन्द कोठाभित्र होइन, खुलामञ्चमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौँ । सबै टेलिभिजन बोलाएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै वार्ता गरौँ । यसका लागि अनशन तोड्नुपर्छ ।
केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार छ
अनशन सुरु गरेदेखि नै डा. गोविन्द केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको हो । सुरुमा कठोर बन्नुभयो, हिजोदेखि केही लचक हुनुभएको छ । उहाँका मागमा सरकार गम्भीर छ, केही मागमा विवाद पनि छ । पक्ष र विपक्ष भएर समस्या समाधान हुँदैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पुगेको छ, संसद्ले नै उहाँले उठाएका मागलाई वैधानिकता दिने हो । उहाँले चाहेको संशोधनलाई सांसदहरूमार्फत कुराहरू राख्न सक्नुुहन्छ, कानुनी बाटोबाट मात्रै समस्या समाधान हुन्छ, अनशन बसेर हुँदैन ।
चिकित्सकको टोलीलाई केसीले भने– भेट्न आउनुस्, काठमाडौं लाने दुःख गर्नुपर्दैन
म अहिले काठमाडौं आउने पक्षमा छैन । मलाई हेर्न आउने भए ठीक छ । लिनकै लागि हो भने दुःख नगरे हुन्छ । काठमाडौं फर्केर वार्ता गर्दिनँ । म कर्णालीको जनताका लागि यहाँ आएको हुँ । काठमाडौं गएर वार्ता गर्दा कर्णालीका जनताको अपमान हुन्छ । सरकार वार्ता र संवाद गर्न चाहने भए जुम्लामै आउनुपर्छ । म तयार छु । वार्ता टोलीविना चिकित्सकहरू आउनुको अर्थ छैन । म अचेत नहुँदासम्म जुम्लामै बस्छु । मलाई काठमाडौं लैजानभन्दा तीन करोड नागरिकको हकमा चिकित्सा शिक्षा र उपचार व्यवस्था सुधार्नु ।